Ndị a bụ mkpọtụ mkpọtụ na-akagbu ekweisi na onye ọ bụla na-azụ ugbu a, ha dịkwa $ 30 - BGR - TELES RELAY
Ndị a bụ mkpọtụ na-ekpo ọkụ na-akagbu ekweisi nke onye ọ bụla na-azụ ugbu a, ha bụ $ 30 - BGR
Amazon Smart Plug Deal na-ejikọ ngwaọrụ nzuzu gị niile na ...
Etu ị ga-esi nweta ego ndị ọzọ na Amazon na ...
Amazon nwere onyinye dị ịtụnanya nke ngwa ngwa 4, yana 15…
Ọ bụrụ n ’ịnọ n’ahịa maka ekweisi ntị ọhụrụ etinyere ugbu a, enwere naanị otu nhọrọ iji tụlee: Mpow H5 Noise Noise Canceling ekweisi ekwe. Igweisi ekweisi emeziwo ka mma n'oge na-adịbeghị anya na-egosipụta atụmatụ dị mma, nke mara mma ma na-edochabeghị anya, iko ndị ahụ bụkwa ụfọdụ n'ime ntụsara ahụ anyị gbalịrịla. Ma nke ahụ bụ nanị ọnụ mmiri iceberg.
Igwe okwu H5 ANC na-eweta ezigbo ụda nke ga-eme ka ị maa jijiji n'ịtụle ego ha nwere, na mkpọtụ ịkagbu mkpọ Mpow dị egwu. N'elu nke ahụ, ị ​​ga-enweta ndụ batrị nke ihe ruru 30 awa! Igwe okwu H5 dị mma maka onye ọ bụla achọghị iji $ 350 ma ọ bụ karịa na mkpọtụ mkpọre kagbuo ekweisi, ma ha na-ere ugbu a na ọkwa kachasị elu naanị $ 29,99. Na ọnụahịa a, mmadụ ga-abụ onye nzuzu ịhapụ ha ka ha gafere.
Ndị a bụ egbe na ibe ngwaahịa:
Nkà na ụzụ ANC emelitere obere mkpọtụ, na-atụgharịkwu uche: Mpow H5 mkpọtụ na-akagbu ntị ntị Bluetooth iji mee ka teknụzụ ANC dịwanye mma iji belata ụda iji nyere gị aka ilekwasị anya n'ihe ịchọrọ ịnụ. Dị ka obodo juru eju. Noisezụ ụlọ na-arụ ọrụ n'ụgbọelu ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike. Teknụzụ dị elu mkpọtụ mkpọtụ na eletrọniki pụrụ iche na-eme ka o kwe omume.
Oge 30 ka batrị batrị kwụsiri ike karị: Mpi H5 ntị ntị na batrị 500mAh na-enye egwu elekere 30 ma ọ bụ oge mkparịta ụka na ANC. Kporie egwu na-adịghị akwụsị akwụsị n’oge njem niile magburu onwe ya. Mara: Wepu ekweisi Bluetooth kwa 1-2 ka ọ dajụọ ntị gị.
Obi ma gbanwee: Mow H5 Akwadoro nkasi obi maka iji ụbọchị niile mee ihe Site na earbuds na-ebu isi, ngwa ngwa protein buru ibu na swivel, foldable na headband na-enye gị ahụmịhe dị mma. 240g nwere ike ịnweta nchekwa.
Ndakọrịta Bluetooth dị elu: Igwe okwu Ikuku Mpow na Bluetooth V4. 1 nwere ike ịdị mfe na ngwa ngwa jikọọ na smartphones, mbadamba ma ọ bụ ngwaọrụ Bluetooth ndị ọzọ n'ime radius nke 10 mita. Nye onwe gị ahụmịhe ọhụụ. Igwe okwu dị elu na olu dị elu na-eme ka ọ dị mfe ịkpọ oku na-abata ma mee nkata olu ma ọ bụ kpọọ nkwukọrịta mgbe ị na-ege egwu.
Qualityda dị elu dị elu: ndị Mpow P10 Premium 40 mm stereo na-ekwu okwu na-enye ụda olu dị omimi na nke zuru oke.
Mpow H5 Noise nọ n'ọrụ kagbuo ekweisi Bluetooth (nweta nkwalite) na-ebelata mkpọtụ site n'okporo ụzọ obodo, ụlọ ụgbọ elu ma ọ bụ hubbub. Kporie ihe omumu na-ege ntị na gburugburu ebe ọ na-eme mkpọtụ.
Na nnukwu oghere 40mm Dual ọkwọ ụgbọala na-ebufe ụda HD na bass siri ike, Mpow H5 Noise na-arụ ọrụ na-akagbu ekweisi Bluetooth (Nweta nkwalite) nwere ike inye gị ahụmịhe ige ntị zuru oke.
Ihe eji edozi isi, enwere ike idozi paịlị na-enye nkasi obi na-enweghị nhazi. Igwe eji ntị ekwe ntị Mpow Bluetooth agbagote agafeela ugboro 10000 ihe nnwale na-eme mgbanwe maka ịdịte aka ka mma.
Wuru na CVC 6.0 mkpọtụ ịkagbu Igwe okwu na-eme ka mkparịta ụka oku doro anya. Gbanwee egwu / olu, kpọọ / kwụsịtụ egwu, zaa / kwụghachi mfe ma dị mfe karịa na bọtịnụ njikwa na ntị.
Batrị ahụ etinyere na-enye ihe dị ka awa 30 nke egwu, ịnwere ike ijikọ ekweisi Bluetooth na eriri USB dị na ya mgbe batrị dị ala maka ọchị na-adịghị agwụ agwụ. Ndụmọdụ Dị Ọkụ: Biko gbanyụọ ANC mgbe ịchọghị ya iji belata oriri batrị.
Site na teknụzụ Bluetooth 4.1, ịnwere ike ịkwanye egwu gị site na smartphones, mbadamba, TV na ngwaọrụ egwu ndị ọzọ n'ime redio ụkwụ 33. Mara: needkwesiri iwepu blu Bluetooth nkewa mgbe ejikọtara ya na TV.
na-eso BGRDeals na Twitter iji gaa n'ihu na nkwekọrịta kachasị ọhụrụ na nke kachasị anyị hụrụ na weebụ. Akwụ ụgwọ ga-agbanwe na-enweghị ọkwa na Kupọns ndị anyị kpọtụrụ aha n'elu nwere ike ịdị na ọnụọgụ dị oke. BGR nwere ike ịnata ọrụ na iwu etinyere site na edemede a, onye na-ere ahịa nwere ike ịnweta ụfọdụ data ga-agbagha maka ebumnuche akaụntụ.
aka ekedepBGRudana-ekpo ọkụekweisihaIHEUGBU A
Akụ na ụba Cameroon: ụgwọ dị ukwuu nke Steti na mbido ebubata ibu na-adịghị akwụ ụgwọ?
Na nkeji nke abụọ nke 2, Tractafric ga-ere igwe ndokwasa na mpaghara mmepụta nke ọdụ ụgbọ mmiri nke Kribi
Amazon Smart Plug Deal na-ejikọ ngwaọrụ nzuzu gị maka ihe na-erughị $ 5 ọ bụla ...
Etu ị ga-esi nweta ego ndị ọzọ na Amazon na akaụntụ azụmaahịa Amazon ...
Amazon nwere 4 ịtụnanya ntabi ite amụọ, yana 15 oké ngwa…
Ihe omimi miri emi n'ime ihe kachasị elu anyị ruo ugbu a - BGR